शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसदलाई हामीले आन्दोलन गरेर फर्काएको हो : पौडेल - HelloKhabar
२०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २१:०८
हामीले आन्दोलनबाट नै संसद फर्काएर ल्याएको हो । शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसदलाई आन्दोलनबाट फर्काएको हो नि । फेरि इतिहास नदोहाेरियाेस् २०६२/६३ को जस्तो । अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरोस अनि फेरि ठूलो आन्दोलन होस अनि त्यही आन्दोलनका बलमा संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने दिन नआओस । यो चुनाव त हुनेवाला छैन । बैशाखको २७ गतेपछि शासनको अधिकार को संग हुन्छ, चुनाव गर्छु भनेकाले बैशाख २७ गतेसम्म केपी ओलीसंग शासन गर्ने अधिकार होला तर त्यो भन्दा पछि शासन गर्ने अधिकार को संग हुन्छ ? त्यसो हुँदा मुलुकमा अराजकता आउछ । त्यसपछि यो राज्यलाई नेत्रविक्रम चन्दहरुले पनि च्यालेन्ज गर्ने भए सेनाले पनि च्यालेन्ज गर्ने भए । जोसंग हतियार छ उसैले राज्यलाई च्यालेन्ज गर्ने भए । जो संग हतियार छ उहि शक्तिशाली हुने दिन आउछन् । को संग हुन्छ शासन गर्ने अधिकार । मुलुकमा यस्तो अवस्था आउदैछ ।
यो अवस्था आउदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई वेवारिसे छोड्नु हुदैछ । मेरो पार्टीमा पार्टीका नेताहरुसँग यही आग्रह हो । नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले मुलुकमा संकट भएका बेलामा कांग्रेस रमिते बन्न हुँदैन । कांग्रेस देशको वारेस हो । कांग्रेस देशको भरोसा हो । हिजो राजा थिए । आजको भरोसा राजनीति दल नै हुन् । राजनीति दलहरुलाई पनि नेपाली जनताले भरोसा गरेका थिए । ती जनतालाई धोका दिएर कता-कता पुगे । त्यसैले मुलुक र जनताको भरोसा कांग्रेस नै हो । कांग्रेस सहि बाटोमा सही ढंगले उभिएन भने यसलाई भरोसा किन गर्ने ? जनताले भरोसा नै गर्ने ठाँउ पाएनन भने के हुन्छ ? अब हामीले भन्नुपर्छ मुलुक र जनतालाई भरोसा दिन्छौ । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउछौ । नेपाली जनताको ७० वर्ष सम्मको पसिना खेर जान दिदैनौ । यो परिवर्तन हामी जोगाउछौ भनेर कांग्रेसले भन्नुपर्छ । यो संविधान र यो लोकतन्त्र जोगाउनका लागि हामीले कुनै पनि मुल्य चुकाउनु हुँदैन ।
त्यसो भएका हुनाले यो प्रतिनीधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ । अहिले हेर्दा त सरक्क चुनाव हुन्छ हामी जितिहाल्छौ भन्ने होला । संसद पुनःस्थापना हुँदा मन्त्री बन्ने सांसद बन्ने सबै उनीहरु नै हुन । चुनाव भयो भने हामी जितौला तर अहिले हामीले तत्कालिन फाइदा हेर्ने कि मुलुकलाई संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई हेर्ने ?
मैले पार्टीका ३ वटा प्रस्ताव राखेको थिए, संवैधानिक अंगका नियुक्तीको खारेजी, संसदको पुनःस्थापना र प्रदेशमा दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरौ भन्ने तर मेरो प्रस्ताव पास भएन । पार्टी निर्णय विहिन भएर पार्टी बसिराखेको छ । हामी निर्णय विहिन बन्ने होइन हामीले त मुलुकलाई दिशा दिने हो मुलुकलाई बाटो देखाउने हो ।
(धरान उपमहानगरपालिकामा रहेको वीपी पार्कमा वीपी कोइरालाको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको मन्तब्य २०७७ फागुन ७ गते)
काराेबार हेलाेखबर - २०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २१:०८
समाज २०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २१:०८
मुख्य समाचार २०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २१:०८
ब्यानर २०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार २१:०८